Malezia: Fandevenana Islamika An’ilay Foko Indiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Desambra 2017 4:18 GMT
Niteraka adihevitra teo amin'ny vahoaka ny fifandirana vao haingana momba ny fandevenana “noterena” an'ilay mpihanika tendrombohitra avon'i Malezia M. Moorthy araka ny fombam-pivavahana Silamo, fanapahan-kevitra izay nifandiran'ny fianakavian'i Moorthy.
Talohan'io, saika hanambara i Kaliammal Sinnasamy, vadin'i Moorthy fa Haindò ny vadiny maty ary nampihatra ny fomba fiainana Haindò talohan'ny nahafatesany ary tsy mbola nilaza na dia teny iray tamin'izany resaka fiovam-pinoana izany tamin'ny fianakaviany. Taorian'izany, nametraka fitoriana sivily tany amin'ny Fitsarana Ambony izy, izay hotsaraina any aoriana, satria tsy te hanakorontana ny fanambarana ny fitsarana fa Silamo i Moorthy, noho ny raharaha teo ambany ny fahefan'ny Fitsarana Syariah. Ny rahalahin'i Moorthy, izay niova ho Miozolomana ihany koa ary izy ihany no fianakaviana no hany nanatrika ny fandevenana.
Mihevitra ny ankamaroan'ny vahoaka Maleziana fa manana adidy ara-môraly ireo niova ho silamo hampahafantatra ny fianakaviana ny fiovam-pinoana indrindra raha efa nanambady sy nanan-janaka izy ireo, izay nanoloran'ny filohan'ny Hetsika Iraisam-pirenena ho an'ny Tontolo Marina, ny Dr Chandra Muzaffar fifanekena ao anatin'ny taratasy fanamarinana ny fiovam-pon'ny Miozolomana vaovao fa hilaza amin'ny fianakaviana izy, raha nilaza kosa ny filohan'ny Vaomieran'ny Zon'Olombelona Malezia, Abu Talib Othman fa tsy tokony hiala ilany amin'ny raharaha ny fitsarana sivily amin'ny fandidiana fotsiny fa eo ambany ny fahefan'ny fitsarana Syariah ny fiovan'i Moorthy ho silamo.
Politika 101 Malezia kosa mihevitra fa mila vahaolana ara-politika ny raharaha izay nanomboka tamin'ny fifandirana ara-pitsarana sy lasa krizin-dalàmpanorenana, raha nanokana blaogy fanarahamaso tamin'ity tranga ity kosa i Maobi.